ကလေးတှအေတှကျ မိဘတှဆေီကနေ နစေ့ဉျကွားဖို့ လိုတဲ့ စကားအသုံးအနှုနျး (၇)ခု - Lifestyle Myanmar
မိဘအုပျထိနျးမှုက အရမျးခကျခဲနိုငျပါတယျ၊ မိဘတဈယောကျအဖွဈသငျယူဖို့ အခကျခဲဆုံးတှထေဲက တဈခုကတော့ ကလေးတှကေို ဘယျလိုပွောရမလဲဆိုတာ ဖွဈပါတယျ။ တခါတရံမှာ မိဘတှရေဲ့ ကလေးရဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာကို ထိခိုကျစနေိုငျတဲ့ စကားလုံးတှကေို ပွောမိကွပါတယျ။ အမြားစုကတော့ အလုပျကနေ အိမျပွနျလာတဲ့အခြိနျ ၊ ပငျပနျးနတေဲ့အခြိနျ၊ စိတျတိုနတေဲ့အခြိနျမှာ ပွောမိတတျကွပါတယျ။’ နငျ့လောကျဆိုးတဲ့ ကလေး မတှဖေူ့းဘူး’၊ ‘သှား! ငါ့ရှမှေ့ာမနနေဲ့’၊ ‘ငါ့ကိုအနှောကျအယှကျ မပေးစမျးနဲ့’ စတဲ့ စကားလုံးမြားက ကလေးစိတျကို နာကငျြစပေါတယျ။
နတေို့ငျးမမေတေို့ရဲ့ ကလေးကို ပွောဖို့ စကားလုံး ၇ခု
စိတျဓါတျခိုငျမာတဲ့ ကလေးတဈယောကျကို ပွုစုပြိုးထောငျခငျြရငျ ကလေးကို မှနျကနျတဲ့ မကျဆခြေျ့တှေ ပေးပို့သငျ့ပါတယျ။ သားသားမီးမီးတှေ မကွာခဏ ပိုပွီးကွားဖို့လိုတဲ့ စကားလုံး(၇) လုံးရှိပါတယျ။
ကလေးတှကေို လသားအရှယျကနေ ၁နှဈ ၂နှဈအရှယျအထိတော့ ခဈြတယျဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သငျပွောကောငျးပွောပါလိမျ့မယျ။ နညျးနညျး အရှယျရောကျလာတဲ့အခါ မမေတေို့အနနေဲ့ ဒီစကားလုံးတှကေ ကွကျပြောကျငှကျပြောကျ ပြောကျသှားပုံရပါတယျ။ ဘယျအသကျအရှယျဘဲဖွဈဖွဈ ကလေးတဈယောကျအတှကျ ဒီစကားလုံးတှကေ အရေးကွီးပါတယျနျော။ စကားလုံးတှနေဲ့ မမေတေို့ရဲ့ အခဈြကို ဖျောပွပါ။ မမေတေို့ကလေးက မမေတေို့ခဈြတယျဆိုတာ သိဖို့ လိုအပျပါတယျ။
၂။ သမီး/သားလေးအတှကျ မမေဂေုဏျယူတယျ
ကလေးကို confident ရှိတဲ့ လူတဈယောကျအဖွဈ ကွီးပွငျးစခေငျြရငျ သူတို့ကို ဂုဏျယူကွောငျး ပွောပေးပါ။ ယှဉျပွိုငျမှုတဈခုမှာ သူတို့ ဘယျနရော ယူခဲ့တယျဆိုတာ အရေးမကွီးပါဘူး။ မမေတေို့ရဲ့ ခြီးကြူးစကား ပွောပေးဖို့ပဲ လိုပါတယျ။
ကရြှုံးမှုက အောငျမွငျမှုရဲ့ အရေးပါတဲ့ အစိတျအပိုငျးဆိုတာ ကလေးတှေ နားလညျဖို့ လိုပါတယျ။ သူတို့အမှတျမကောငျးလို့ မဆူပါနဲ့။ ထပျကွိုးစားဖို့ ပွောပါ။ တခါတရံမှာ အတှအေ့ကွုံတှကေ နာကငျြစနေိုငျတာကွောငျ့ သငျ့ကလေးကို အားပေးဖို့လိုပါတယျ။ သူတို့ဟာ နောကျတခြိနျမှာ ဘယျလိုကွိုးစားရမယျဆိုတာ သိလာပါလိမျ့မယျ။
၄။ သား/သမီးကို မမေယေုံတယျ
ကလေးတှေ အမှီခိုကငျးကငျး ပွုမှုဆောငျရှကျနိုငျစဖေို့ မကွာခဏ ပွောပေးသငျ့တဲ့ စကားအသုံးအနှုနျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီစကားလုံးတှကေ သငျ့ကလေးကို ယုံကွညျမှုပေးပွီး တာဝနျယူမှုကို သငျပေးပါတယျ။ မိဘတှကေ သူတို့ကို ယုံကွညျကိုးစားလြှငျ ကလေးဟာ မိဘအပျေါ လိမျလညျ လှညျ့စားနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။
သူတို့အရုပျလေးတှကေို သနျ့ရှငျးရေးလုပျနရေငျတောငျ အရာရာတိုငျးအတှကျ ကလေးကို ကြေးဇူးပါ လို့ပွောပေးပါ။ ဒီစကားအသုံးအနှုနျးက တခွားသူတှနှေငျ့ သငျ့အပျေါ ထို့နညျးတူ လုပျဆောငျဖို့ ကလေးကို သငျပေးပါလိမျ့မယျ။
၆။ ကြေးဇူးပွုပွီး ကူညီပါဦး
ကလေးတိုငျးက ‘ငါဟာ အရေးပါတဲ့ သူပါလားလို့’ ခံစားဖို့ လိုပါတယျ။ သားသားမီးမီးတှကေို သူတို့လုပျနိုငျတဲ့အရာလေးတှကေို ဝိုငျးကူပေးဖို့ အကူအညီတောငျးပါ။ အဖရေဲ့ ကားကို ရဆေေးပေးရရငျတောငျ သူတို့ဂုဏျယူပါတယျ။ ‘သား/သမီးမရှိဘဲ ဒီအလုပျတှလေုပျဖို့ ခကျခဲတယျ’ စတဲ့ စကားလုံးလေးတှေ ပွောပေးဖို့ မမပေ့ါနဲ့နျော။
၇။ မမေ့ဘေ့ဝထဲမှာ သား/သမီးရှိတဲ့အတှကျ အရမျးပြျောတယျ
မမေတေို့ကလေးဟာ အထူးသဖွငျ့ ဆယျကြျောသကျအရှယျအတှငျးမှာ သူတို့ပတျဝနျးကငျြကမ်ဘာကွီးနဲ့ ဆကျဆံရတဲ့အခါ ပွဿနာတှေ မကွာခဏ ရှိပါလိမျ့မယျ။ ဆယျကြျောသကျတဈယောကျဟာ မိဘက စိတျမခလြို့ ညဘကျအပွငျ မသှားနဲ့ပွောတဲ့အခါ၊ နရောတကာ လိုကျခြုပျခယျြတဲ့အခါ ‘သူမြားအမတှေကေ မခြုပျခယျြဘူး၊ ငါ့အမကေ ငါ့ကိုခဈြတာကော ဟုတျရဲ့လား’လို့ မိဘတှရေဲ့ အခဈြကို သံသယ စဝငျတတျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကလေးတှကေို သူတို့ရှိနလေို့ သငျပြျောရတဲ့ အကွောငျး ပွောပွပေးပါ။
ကလေးတိုငျးဟာ ရိုသလေေးစားမှုရှိပွီး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ လူတဈယောကျအဖွဈ confident ရှိသူတဈယောကျအဖွဈ ကွီးပွငျးရပါမယျ။ ဒီစကားအသုံးအနှုနျးမြားက ကူညီပေးနိုငျပါတယျ။ နတေို့ငျး အပွုသဘောဆောငျတဲ့ အရာတဈခုခုကို ပွောပေးပါ။ ကလေးနှငျ့ မမေတေို့ရဲ့ သံယောဇဉျက ခိုငျမာလာပါလိမျ့မယျ။
ကလေးတွေအတွက် မိဘတွေဆီကနေ နေ့စဉ်ကြားဖို့ လိုတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်း (၇)ခု
မိဘအုပ်ထိန်းမှုက အရမ်းခက်ခဲနိုင်ပါတယ်၊ မိဘတစ်ယောက်အဖြစ်သင်ယူဖို့ အခက်ခဲဆုံးတွေထဲက တစ်ခုကတော့ ကလေးတွေကို ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံမှာ မိဘတွေရဲ့ ကလေးရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေကို ပြောမိကြပါတယ်။ အများစုကတော့ အလုပ်ကနေ အိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန် ၊ ပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်၊ စိတ်တိုနေတဲ့အချိန်မှာ ပြောမိတတ်ကြပါတယ်။’ နင့်လောက်ဆိုးတဲ့ ကလေး မတွေ့ဖူးဘူး’၊ ‘သွား! ငါ့ရှေ့မှာမနေနဲ့’၊ ‘ငါ့ကိုအနှောက်အယှက် မပေးစမ်းနဲ့’ စတဲ့ စကားလုံးများက ကလေးစိတ်ကို နာကျင်စေပါတယ်။
နေ့တိုင်းမေမေတို့ရဲ့ ကလေးကို ပြောဖို့ စကားလုံး ၇ခု
စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ချင်ရင် ကလေးကို မှန်ကန်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတွေ ပေးပို့သင့်ပါတယ်။ သားသားမီးမီးတွေ မကြာခဏ ပိုပြီးကြားဖို့လိုတဲ့ စကားလုံး(၇) လုံးရှိပါတယ်။
ကလေးတွေကို လသားအရွယ်ကနေ ၁နှစ် ၂နှစ်အရွယ်အထိတော့ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သင်ပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။ နည်းနည်း အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ မေမေတို့အနေနဲ့ ဒီစကားလုံးတွေက ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်သွားပုံရပါတယ်။ ဘယ်အသက်အရွယ်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ကလေးတစ်ယောက်အတွက် ဒီစကားလုံးတွေက အရေးကြီးပါတယ်နော်။ စကားလုံးတွေနဲ့ မေမေတို့ရဲ့ အချစ်ကို ဖော်ပြပါ။ မေမေတို့ကလေးက မေမေတို့ချစ်တယ်ဆိုတာ သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၂။ သမီး/သားလေးအတွက် မေမေဂုဏ်ယူတယ်
ကလေးကို confident ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်အဖြစ် ကြီးပြင်းစေချင်ရင် သူတို့ကို ဂုဏ်ယူကြောင်း ပြောပေးပါ။ ယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်ခုမှာ သူတို့ ဘယ်နေရာ ယူခဲ့တယ်ဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး။ မေမေတို့ရဲ့ ချီးကျူးစကား ပြောပေးဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
ကျရှုံးမှုက အောင်မြင်မှုရဲ့ အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဆိုတာ ကလေးတွေ နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ သူတို့အမှတ်မကောင်းလို့ မဆူပါနဲ့။ ထပ်ကြိုးစားဖို့ ပြောပါ။ တခါတရံမှာ အတွေ့အကြုံတွေက နာကျင်စေနိုင်တာကြောင့် သင့်ကလေးကို အားပေးဖို့လိုပါတယ်။ သူတို့ဟာ နောက်တချိန်မှာ ဘယ်လိုကြိုးစားရမယ်ဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။
၄။ သား/သမီးကို မေမေယုံတယ်
ကလေးတွေ အမှီခိုကင်းကင်း ပြုမှုဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ မကြာခဏ ပြောပေးသင့်တဲ့ စကားအသုံးအနှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားလုံးတွေက သင့်ကလေးကို ယုံကြည်မှုပေးပြီး တာဝန်ယူမှုကို သင်ပေးပါတယ်။ မိဘတွေက သူတို့ကို ယုံကြည်ကိုးစားလျှင် ကလေးဟာ မိဘအပေါ် လိမ်လည် လှည့်စားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သူတို့အရုပ်လေးတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေရင်တောင် အရာရာတိုင်းအတွက် ကလေးကို ကျေးဇူးပါ လို့ပြောပေးပါ။ ဒီစကားအသုံးအနှုန်းက တခြားသူတွေနှင့် သင့်အပေါ် ထို့နည်းတူ လုပ်ဆောင်ဖို့ ကလေးကို သင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
၆။ ကျေးဇူးပြုပြီး ကူညီပါဦး
ကလေးတိုင်းက ‘ငါဟာ အရေးပါတဲ့ သူပါလားလို့’ ခံစားဖို့ လိုပါတယ်။ သားသားမီးမီးတွေကို သူတို့လုပ်နိုင်တဲ့အရာလေးတွေကို ဝိုင်းကူပေးဖို့ အကူအညီတောင်းပါ။ အဖေရဲ့ ကားကို ရေဆေးပေးရရင်တောင် သူတို့ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ‘သား/သမီးမရှိဘဲ ဒီအလုပ်တွေလုပ်ဖို့ ခက်ခဲတယ်’ စတဲ့ စကားလုံးလေးတွေ ပြောပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
၇။ မေ့မေ့ဘဝထဲမှာ သား/သမီးရှိတဲ့အတွက် အရမ်းပျော်တယ်
မေမေတို့ကလေးဟာ အထူးသဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အတွင်းမှာ သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကမ္ဘာကြီးနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့အခါ ပြဿနာတွေ မကြာခဏ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်ဟာ မိဘက စိတ်မချလို့ ညဘက်အပြင် မသွားနဲ့ပြောတဲ့အခါ၊ နေရာတကာ လိုက်ချုပ်ချယ်တဲ့အခါ ‘သူများအမေတွေက မချုပ်ချယ်ဘူး၊ ငါ့အမေက ငါ့ကိုချစ်တာကော ဟုတ်ရဲ့လား’လို့ မိဘတွေရဲ့ အချစ်ကို သံသယ စဝင်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးတွေကို သူတို့ရှိနေလို့ သင်ပျော်ရတဲ့ အကြောင်း ပြောပြပေးပါ။
ကလေးတိုင်းဟာ ရိုသေလေးစားမှုရှိပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်အဖြစ် confident ရှိသူတစ်ယောက်အဖြစ် ကြီးပြင်းရပါမယ်။ ဒီစကားအသုံးအနှုန်းများက ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ နေ့တိုင်း အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အရာတစ်ခုခုကို ပြောပေးပါ။ ကလေးနှင့် မေမေတို့ရဲ့ သံယောဇဉ်က ခိုင်မာလာပါလိမ့်မယ်။